China L-Citrulline dị eluCAS: 372-75-8 ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Binshare
L-Citrulline dị eluCAS: 372-75-8
White kristal ma ọ bụ crystalline ntụ ntụ. Soluble na mmiri, anaghị agbaze na methanol, ethanol na ether. Enwere ike isi na mmiri ọgwụ phosphatungstic mepụta ya wee megharịa ya na ngwọta alkali nke etinyere etolite ornithine, carbon dioxide na amonia.
Aha Bekee: L (+)- Citrulline
Ebe na -agbaze: 214 ° C
Ntụgharị akọwapụtara: 25.5 Celsius (C = 8,6NHCl)
Ebe a na -agba mmiri: 306.48 ° C
Ntughari ntụgharị: 26 Celsius (C = 8,6mol/LHCl)
Ọnọdụ nchekwa: ụlọ ahịa 0-5 ° C
Ọnụọgụ acid: (PKA) 2.43 (AT25 ℃)
Isi: Enweghị isi
Mgbaze mmiri: 200g/L (20 Celsius C)
White kristal ma ọ bụ crystalline ntụ ntụ. Soluble na mmiri, anaghị agbaze na methanol, ethanol na ether. Enwere ike isi na mmiri ọgwụ phosphatungstic mepụta ya wee megharịa ya na ngwọta alkali nke etinyere etolite ornithine, carbon dioxide na amonia. Nnu ọla kọpa bụ kristal prismatic na-agbaze nke 257-258 ℃. Ebe mgbaze nke hydroxide ya, Chemicalbook185 ° C (mbibi), bụ +17.9 Celsius na mmiri [α] D22. A na -ahụ ya na egusi dịka anyụ. N'ime mmadụ, citrate bụ amino acid na -abụghị protein nke anaghị esonye na njikọ protein, mana nwere ikike imepụta njikọ peptide. Echeburu na ọ ga -adị naanị dị ka ngwaahịa etiti nke ornithine -urea cycle.
Njirimara Chemical: ntụ ntụ kristal ọcha, na -agbaze na methanol, ethanol, DMSO na ihe mgbaze ndị ọzọ, sitere na trichosanthin.
Jiri: A kwadebere ụdị arginine nke L dị ka etiti nke NOx site na NO synthase
2. Mmetụta dị ukwuu nke citrulline L- citrulline:
1. Meziwanye usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
2. jigide ọrụ nke ngagharị ngagharị.
3. Dozie ogo shuga dị n'ọbara.
4. bara ụba na mmịkọ antioxidant nke radicals n'efu.
5. Na -enyere aka idobe ọkwa cholesterol nkịtị.
6. Nọgide na -arụ ọrụ ngụ nke Jiankang
7. Meziwanye ido anya nke uche
Belata nchekasị ma merie ịda mbà n'obi
9. melite ọrụ ndụ mmekọahụ nke jiankang
Nrụpụta ọrụ na ịrụ ọrụ: Citrulline bụ amino acid na -abụghị protein nke nwere ikike imepụta njikọ peptide mana ọ naghị esonye na njikọ protein. A na -ele Citrulline anya dị ka ihe etiti ngwaahịa mgbanaka akwụkwọ ndekọ urea. Agbanyeghị, nyocha emere n'oge na -adịbeghị anya egosila na enwere ike iji citrulline n'ọtụtụ ọgwụ, nri, nlekọta ahụike na akụkụ ndị ọzọ, yana nwee ezigbo mmetụta ọgwụ.
Nke gara aga: Isotonitazene asọmpi CAS: 14188-81-9
Osote: Ngwa ngwa mbupu Microcrystalline celluloseCAS: 9004-34-6